किन हात झिकिन् निरुताले ‘लभ स्टेशन’बाट , कारण यस्तो – Gandaki Media
Posted on October 2, 2018 Author By admin	Comment(0)
मुम्बइमा रहँदै आएकी नेपाली चलचित्रकी चर्चित नायिका निरुता सिंहले काम गर्ने पक्का भएको एक चलचित्रबाट हात झिकेकी छिन् । उज्ज्वल घिमिरेको निर्देशनमा अहिले दार्जिलिङ्गमा छायांकन भैरहेको चलचित्र ‘लभ स्टेशन’बाट निरुताले हात झिकेकी हुन् ।
गोविन्द शाहीको निर्माणमा गत शुक्रबारदेखि यो चलचित्रको छायांकन सुरु भएको छ । ५० दिनको सेड्यूलसहित यसको निर्माणपक्ष भारत लागेको हो । नायिका निरुता सिंह र नायक उत्तम प्रधानको जोडीलाई फेरि एकपटक पर्दामा ल्याउने तयारी निर्देशक घिमिरेको थियो । तर, निरुताले भने अन्तिम समयमा आएर चलचित्रमा काम नगर्ने जानकारी दिएकी हुन् । निरुताले अनलाइनखबरसँग भनिन्-‘मलाई लभ स्टेशनमा काम गर्न खुबै मन थियो । तर, अहिले मेरो बुबा बिरामी भएर मुम्बइमा नै उपचार भैरहेको छ । यसैले, मेरा लागि पहिलो प्राथमिकता मेरो बुबा हुनुहुन्छ ।’
निरुताले मंसिर १ गतेबाट छायांकनमा जान लागेको चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’मा भने काम गर्दैछिन् । चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ५’मा काम गरेपछि निरुताको डिमाण्ड चरित्र अभिनेत्रीमा खुबै बढेको छ । यो चलचित्रमा प्रदिप खड्का र जसिता गुरुङको मुख्य भूमिका छ ।
सुतिराख्न कसलाई मन पर्दैन र ? सुत्दा दिमाग तिखो हुन्छ भने शरिरमा दिनभरी काम गर्नका लागि ऊर्जावान् राख्छ । यतिमात्र होइन, पर्याप्त निन्द्राले मोटोपना, मधुमेह, हृदय रोग र समयपूर्व मृत्युको सम्भावना निकै कम हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि कम सुत्दा शरिर र दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ तर धेरै सुत्दा शरिरमा पुग्ने नकारात्मक […]
यूट्यूवमा भाइरल अशोक दर्जिको पहिलो गीत सार्वजनिक ! खुशी हुँदै हामिसंग पोखे दुखका कुरा (भिडियो)
पछिल्लो समय नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङ शीर्षस्थान देखि विभिन्न स्थानमा भाइरल भएका अशोक दर्जिको बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको बिच उनको स्वर रहेको ‘मन बिनाको धन ठूलो कि धन बिनाको मन’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । अशोक दर्जिको उपस्थितिमा काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित ‘स्टुडियो नाइन’ मा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गीतको म्यूजिक भिडियो रिलिज गरिएको हो । बि राज […]
( भिडियो सहित हेर्नुहोस ) एयरहोस्टेजलाई पोर्न फिल्मको लत बसेपछि…
बेलायतमा एक जना एयरहोस्टेजलाई पोर्न फिल्मको नशा यति धेरै चढ्यो कि उनले हुँदाखाँदाको जागिर नै छाडेकी छन् । पोर्न अभिनेत्री बन्नका लागि उनले एयरहोस्टेजको जागिर छाडिन् । आफूलाई पछिल्लो दुई वर्ष एयरहोस्टेज बनेर जहाजमा उड्दा निकै दिक्क लागेकाले पोर्न उद्योगमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ । एयरहोस्टेजको काममा उनको मन गएन । उनको एउटा मात्र […]
बृद्दाश्रम तथा अपांग वालवालिका सहयोगका लागि नि:शुल्क कन्सर्ट